SAWIRRO XUL AH: Banaadir oo laga badin la’yahay 24 kullan oo xirriir ah – Gool FM
SAWIRRO XUL AH: Banaadir oo laga badin la’yahay 24 kullan oo xirriir ah
jilacow November 25, 2016
(Muqdisho) 25 Nov 2016-Kooxaha Elman iyo Banaadir ayaa kullan xiiso badan ku wada ciyaaray garoonka Koonis, waxaana ciyaartaas ay ka tirsaneyd horyaalka Soomaaliya.
Kullanka ayaa ku billaawday si dar dar ah, waxaana qeybtii hore lagu kala nastay 2-1, oo ay ku hoggaamineyso naadiga Banaadir iyadoo 2-da gool ka heshay Marcel, xilli Elman uu goolka u dhaliyay Maxamed Martial.
Kooxda Elman ayaa qaaday weeraro kala duwan oo ay ku dooneysay in ay ku bar bareyso goolka lagu leeyahay balse ma aysan noqon oo ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 2-1.
Banaadir ayaana laga badin 24 kullan oo xiriir ah oo ay ciyaartay horyaalka Soomaaliya xilli ciyaareedkii soo dhamaaday iyo kii kasii horeeyay,waxaana guuldarro horyaalka ah oo soo gaarta BSC u dambeysay 13/05/2015, Xilligaas oo ka badisay naadiga Dekedda.
Naadiga BSC ayaa heysta labada xiddig ee illaa iyo iminka ku dhawaaday in ay dhaliyaan saddexleydii ugu horeysay horyaalka, waana Maxwell iyo Marcel.
SAWIR QAADE: Mahad Shariif Jilacoow
DEG DEG: Banaadir oo ka adkaatay Elman, siina xajisatay hogaanka horyaalka
7 Waxyaabood oo laga bartay kulankii galabta dhexmaray kooxaha Banaadir Sports Club iyo Elman